Maka Vejin Marịa | Ulogu.org
Maka Vejin Marịa
13 articles Maka Vejin Marịa
84.Kedu ụbọchị amụrụ onye nzọpụta anyị?
Posted in Maka Vejin Marịa
O bụ n’ụbọchị Kristmas ka a mụrụ onye nzọpụta anyị
85.Vejin Marịa dị asọ, ọbụ nne nke Chukwu ezie?
Ee, Vejin Marịa dị asọ bụ nne nke Chukwu ezie n’ihi na ọbụ nne Jesu Kristi onye bụ Chukwu
86.Ọbụ n’ụdị Chukwu ka Vejin Marịa mụrụ Jesu Kristi?
Mba, ọ bụghị n’ụdị nke Chukwu ka Vejin Marịa mụrụ Jesu Kristi.
87.Gịnị mere iji ekwu na Vejin Marịa bụ nne nke Chukwu?
Ihe m ji ekwu na Vejin Marịa bụ nne nke Chukwu bụ na Jesu Kristi adịghị Pesịn abụọ kama na ọbụ sọ otu pesịn, n’ihi nkea, Vejin Marịa onye mụrụ Kristi, bụazi nne otu pesịn nke Jesu Kristi ahụ ọ mụrụ.
88. Kọwakene nke a nke ọma?
Pesịn nke abụọ nke Atọ N’ime Atọ N’ime Otu dị Ngọzi bụ okwu nke Chukwu bụụrụ mmadụ site n’iwere ụdị nke mmadụ ka ọbụrụ nke ya. Obịa welite omume nile nke ụdị mmadụ ahụ ka ha na omume nke ya bụ pesịn nke abụọ nke atọ n’ime otu dị ngọzi a bụ pesịn nke Jesu…
89.Gịnị nwere ike ime a sị na Vejin Marịa abụghị nne nke Chukwu ezie?
Ihe nwere ike ime ma asị na Vejin Marịa abụghị nne nke Chukwu ezie bụ na Jesu Kristi agaghị abụ Chukwu mana ọ ga-abụ naanị mmadụ nkịtị. Ma ọbụ ọdị pesịn abụọ: otu pesịn abụrụ Chukwu mke ọzọ abụrụ mmadụ.
90.Gịnị nwere ike ime ma asị na ihe dị etu ahụ mere?
Ihe nwere ike ime ma asị na ihe dị otu ahụ mere bụ na (1) apụghị inweta onye ọbụla nwere ike ịrụ ọrụ mgbapụta nke mmadụ, n’ihi na ọbụrụ na Jesu Kristi abụghị Chukwu o nweghi ụzọ ọ ga-esi ji ọnwụ ya na mbilite n’ọnwụ ya gbapụta mmadụ na njọ.(2) Ọ bụrụ na ọ dị…
91.Ndị na-ekwu na ebe Vejin Marịa bụ onye ekereke, na ọpughị ịbụ nne nke Chukwu, onye okike, ha ọ na ekwute ya?
Mba, ha adịghị ekwute ya n’ihi na Vejin Marịa bụ nne nwa nke Chukwu, onye bụụrụ mmadụ. Ọ bụ nkea mere o jiri bụrụ nne nke Chukwu.
92.Vejin Marịa dị ngọzi, ọ bụ nwanyị nkịtị dịka nwanyị ndị ọzọ ga?
Mba, ọ bụghịkwa nwanyị nkịtị ma ncha, n’ihi na ọbụ nne nwa nke Chukwu. Ya mere oji kwe ukwe otito sị: Bido taa, ndụdụgandụ nile ga na-akpọ m onye dị ngọzi’
93.Vejin Marịa osoro bụrụ onye ome njọ dịka onye ọbụla?
Mba osoghi ma ncha n’ihi na Chukwu pụrụ ime ihe nile ekweghi ka oketa oke mmetọ nke njọ ya na ụta dịrị njọ. Chukwu meere Vejin Marịa nkea n’ihi nnukwu ọrụ pụrụ iche ọ ga-eji ya rụọ. Maka ya ka ojiri doo ya asọ tupu amụọ ya bịa nye ya amara n’uju.